Malaysian Foreign Minister Anifah: Solve Rohingya issue Asean way | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« လက်အုပ်ချီရန် မလိုအပ်ပါ ဆိုတဲ့ ဖတ်သ်ဝါ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးမျိုးညွန့်လက်ထက် သာသနာရေးဦးစီးဌာနက ဦးအံ့မောင်က သက်သေအဖြစ် လက်မှတ်ထိုးထား
Nepal: Deadly Kathmandu earthquake as seen by CCTV »
Malaysian Foreign Minister Anifah: Solve Rohingya issue Asean way
Rohingya refugee issue now for Asean to solve, says Anifah
KUALA LUMPUR: Myanmar’s Rohingya refugee problem should be resolved within Asean, said Foreign Minister Datuk Seri Anifah Aman.
He said that since refugees had fled to Malaysia, Thailand and Indonesia, this issue could no longer be considered as Myanmar’s internal issue.
“While we continue to respect the sovereignty of our member states, this issue should be addressed within Asean and through engagement.
“We hope Myanmar will look for the best way possible so that the issue will not be internationalised,” he toldamedia conference in the run-up to the 26th Asean Summit.
Anifah said Asean appreciated the democratisation process that Myanmar had undertaken and was aware that it took time for things to change.
“Myanmar has assured us that they are taking every step possible to solve the problem,” he added.
The 10 Asean leaders are expected to raise their concerns during their retreat in Langkawi.
Anifah said Myanmar President Thein Sein, who visited Malaysia recently, had assured Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak that the issue of Rohingya refugees would be looked into.
According to records, there are more than 140,000 asylum seekers and refugees from Myanmar living in Malaysia temporarily under United Nations High Commissioner for Refugees.
The Asean Parliamentarians for Human Rights grouping had recently said the bloc must abandon its policy of not interfering in each others’ affairs which has been used asareason to not hold discussions on Myanmar refugees.
ဘင်္ဂါလီများ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ ရွှေ့ပြောင်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးမည်
ဘင်္ဂါလီ (မူရင်း သတင်းတွင် ရိုဟင်ဂျာဟုသုံးနှုန်း ထား)အများအပြား မြန်မာနိုင်ငံမှ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ ရွှေ့ ပြောင်း မှုနှင့်ပတ်သက်၍ တနင်္လာနေ့မှစ၍ နှစ်ရက်ကြာပြုလုပ်မည့် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မလေးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောကြားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂ နှစ်တာအတွင်း မလေးရှား၊ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံများသို့ ဘင်္ဂါလီများ အဓိက ပါဝင်သည့် ဒုက္ခသည်အစုအဝေး များ ရွှေ့ပြောင်းထွက်ခွာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း အာဆီယံနိုင်ငံများက မြန်မာနိုင်ငံ သို့ ပြောကြားကြသည်ဟု မလေး ရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အာနီဖာအာမင်က ပြောကြားကြောင်း အေပီသတင်းဌာနက ဖော်ပြသည်။
‘‘အဲဒါက ပြည်တွင်းရေးပါ။ ဒါပေမဲ့ မလေးရှားနဲ့ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံတွေဆီကို ပျံ့နှံ့သွားပြီဆိုရင် တော့ အဲဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံတစ် နိုင်ငံတည်းရဲ့ အရေးမဟုတ်တော့ ပါဘူး။ ဒီပြဿနာကို နိုင်ငံတကာ ပြဿနာ ဖြစ်မလာအောင်လို့ အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းရှာဖွေ ပါဆိုပြီး မြန်မာကို ကျွန်တော်တို့ က မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်’’ဟု ဝန်ကြီးအာနီဖာအာမင်က ပြော သည်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်း ရေးကို အခြားနိုင်ငံက ဝင်ရောက် မစွက်ဖက်ရေးဆိုသည့် အာဆီယံမူဝါဒအပေါ် ဘင်္ဂါလီပြဿနာနှင့်
ပတ်သက်၍ လေးနက်သောဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် အသုံးချခဲ့ဖူးကြောင်း ဝေဖန်မှုများရှိသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ပြုလုပ် မည့် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၌ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘင်္ဂါလီပြဿနာကို ဆွေးနွေးရန် ပြီးခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ က အရှေ့တောင်အာရှဥပဒေပြု လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ့ ခေါင်းဆောင်အသီးသီးအား တိုက်တွန်းခဲ့ကြသည်။ ဒေသ၌ ပင်လယ်လမ်းကြောင်းမှ ရွှေ့ပြောင်းထွက်ခွာ၍ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တောင်းဆိုသူများမှာ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကာလနောက်ပိုင်း အမြင့်ဆုံးစံချိန်ဆီ ဦးတည်နေပြီဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ဆိုသည်။
တစ်နိုင်ငံ၏အရေးကို တစ် နိုင်ငံက ဝင်မစွက်ဖက်ရေးဆိုသည့်မူဝါဒကို အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံအနေဖြင့် ဖျက်သိမ်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း (ဒေသတွင်း ဥပဒေပြုသူများ စုပေါင်း ထားသည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သော)လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံ လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များက ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သည်။
‘‘ဒါက ဒေသတွင်း လူကုန် ကူးမှု ကူးစက်ရောဂါပြန့်ပွားမှုဆီ ဦးတည်သွားပြီ။ လူသားဆိုင်ရာ ကပ်ဘေးတစ်ခုဟာ ဖြစ်ပွားနေ ပြီ။ အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေ ဟာ ဒါကို ဝင်မစွက်ဖက်ရေးဆိုတဲ့ မူဝါဒသဘောထားတရားနောက် မှာ ဖုံးမထားနိုင်ပါဘူး။ ဖုံးလည်း မဖုံးထားသင့်ဘူး’’ဟု မလေးရှား ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ချားလ်စ်ဆန်တီယာဂိုက ပြောသည်။
အာဆီယံလွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ်များအနေဖြင့် ရိုဟင်ဂျာ အရေးအစီရင်ခံစာတစ်စောင်နှင့် မေတ္တာရပ်ခံစာတစ်စောင်တို့ကို ပူးတွဲ၍ အာဆီယံခေါင်းဆောင် များထံ ပေးပို့ရန်ရှိနေသည်။ —Ref: AP
This entry was posted on April 25, 2015 at 6:17 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “Malaysian Foreign Minister Anifah: Solve Rohingya issue Asean way”
April 25, 2015 at 7:17 am | Reply
Latest News: (4/25/2015 – 10:42 am)
ဧပြီ ၂၃ တိုက်ပွဲ၌ အစိုးရတပ်မှ အနည်းဆုံး ၉ဝဦး ကျဆုံးဟု ကိုးကန့်အဖွဲ့ပြောဆိုချက် DVB ဖော်ပြ
ရခိုင်ရှိ မွတ်ဆလင်လူနည်းစုအား သက်သေခံကတ်ပြားမထုတ်ပေးပါက မြန်မာမတည်ငြိမ်ဟု ဘန်ကီမွန်းဆို
ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာသည်နှင့် မြန်မာ၌လူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခ လက္ခဏာများ ကုလမြင်နေရဟု ပြော
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်း တရုတ်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ သွားမည်